Real Madrid Oo Isha Ku Heysa Daafaca Manchester City Pedro Porro
HomeSuuqa kala iibsigaReal Madrid oo isha ku heysa daafaca Manchester City Pedro Porro
November 24, 2021 Suuqa kala iibsiga, Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha 0
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa in ay isha ku hayso Pedro Porro iyada oo maanka ku haysain ay u dhaqaaqdo saxiixa daafaca Manchester City inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga soo socda.
22-sano jirkaan ayaa Man City kaga soo biiray Girona 2019, laakiin weli uma soo muuqan safka koowaad ee Citizens, isagoo waqti amaah ah kula qaatay Real Valladolid iyo Sporting Lisbon .
Sporting ayaa fursad u haysata inay heshiis joogto ah kula soo saxiixato Porro sanadka soo socda, kooxda reer Portugal ayaa la sheegay inay ka go’an tahay inay sii haysato xiddiga heerka caalami ee dalka Spain.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Mundo Deportivo , waxaa jira xiiso dhab ah oo ka imaanaya Real Madrid, kuwaas oo doonaya inay la soo wareegaan daafac midig oo cusub si ay ula tartamaan Dani Carvajal booska koowaad.
Porro ayaa dhaliyay lix gool waxaana loo diwangeliyay afar caawin 52 kulan oo uu u saftay Sporting tartamada oo dhan.